Isiphandla Sezikhali seNyakatho Kapa
Sa ǁa !aĩsi 'uĩsi - "Siyahamba kahle" yisiqubulo seNyakatho Kapa, ​​esihunyushwe ngesiSan. Lesi siqubulo sibhalwe phansi eNorthern Cape Coat of Arms, esinikezwe ngo-25 Agasti 1997. Isizinda sinobuciko obuningi emanzini asundu futhi sinomphumela we-3D, okumelela amathafa avulekile namadwala eNyakatho Kapa.
Isihlangu sihlala esisekelweni, sinesimo sedayimane esiphezulu ensimini yezihlangu. Iphansi ledayimane nesihlangu limibala eluhlaza okwesibhakabhaka nomhlophe esimweni segagasi, ekhombisa ogwini lwaseNyakatho Kapa lapho kunezidayimane eziningi eziye zahlungwa.
Futhi ngesimo sodayimane, umuthi wameva uboniswa. Amakhonksi aphezulu kakhulu isihlangu azinemibala ebomvu nge-daisy ephuzi ohlangothini ngalunye. Ukuma kwedayimane kubonisa ukutholakala kwemayini kanye nezomnotho esifundazweni.
Ama-daisies aphuzi abhekisela elangeni nasemagugu eziphilayo, ikakhulukazi embukisweni wonyaka we-spring springflower owenzeka emva kwemvula yasebusika esifundeni. I-crest iyi-coronet equkethe i-circlet ehlanganiswe ne-San beadwork. Isihlangu sisekelwa i-oryx ngakwesobunxele ne-kudu (owesilisa) ngakwesokudla.
Isibonakaliso Sembali - I-Namaqua Daisy (Dimorphotheca sinuata)
Amaphepheni e-orange festoon emagumbini, ngaphambi kokuba imvula yasebusika iwile, ibonakala njengomhlabathi ongekho, ukudweba izivakashi ezivela emhlabeni wonke ukuzobona lo mbono waminyaka yonke wemvelo eNyakatho Kapa - umbukiso wase-Namaqualand wesibhakabhaka.
I-Namaqua daisy iyimbali yaminyaka yonke ekhula kakhulu emasimini ngemuva kwemvula yasebusika emaProvinsi aseNyakatho naseWestern Cape eNingizimu Afrika. Izimbali ziyi-daisy-efana nezikhala ezinkulu ezineziko le-orange, nakuba isikhungo singase sibe sephuzi ngezinye izikhathi.
Eceleni komngcele ophansi wamagundane, kukhona indandatho encane yama-mauve eluhlaza. Imbali ihluma ngemibala ehlukahlukene ecacile kubandakanya i-orange ekhanyayo, ephuzi, ukhilimu kanye ne-saumon. Badinga ilanga eligcwele ukuvula nokulandelela ilanga njengoba lihamba empumalanga kuya entshonalanga.
Okubalulekile kakhulu ukwazi ukuthi uhlela ukuthatha izithombe zezimbali. Ungahambisani ne-flower spotting ezinsukwini ezigqamile noma ekuseni kakhulu, njengoba izimbali zizovalwa.
Isibonakaliso Sezilwane - I-Oryx (Oryx gazelle)
I-oryx, eyaziwa nangokuthi i-gemsbok, iyakwazi ukubhekana nokushisa kwama-desert okushisa nokuntuleka kwamanzi ngokusebenzisa ukushisa okubucayi ebuchosheni bayo ukunciphisa amanzi adingekayo nokugcina ubuchopho bupholile. I-oryx ikhiqize i-adaptation eyaziwa ngokuthi i-carotid rete, okuyi-network of capillaries engxenyeni yobuchopho.
I-Warmblood eya ebuchosheni nge-artery carotid kuqala idlula uchungechunge lwe-capillaries kwinethiwekhi yesinus, lapho ikhiphe khona ukudluliswa kwesibindi kusuka egazini elipholile eliyingozi elishiya ubuchopho. Enye indlela yokushisa i-oryx okuqashwe ngayo i-oryx ukugxilisa umchamo bese ubamba umswakama ngangokunokwenzeka kusuka emgodini wayo, okhiqiza amapelisi aqinile kakhulu.
I-Gemsbok, kokubili ama-grazers neziphequluli, ukondla emaqabunga, utshani, izithelo nemifino, zonke izidingo zazo zamanzi ziyaneliseka ngokudla kwazo. Nokho, uma amanzi etholakala bayothatha isiphuzo. I-oryx ivame ukuhlangana emhlambini yezinkomo ezihlanganisa izinsikazi kanye nezinkunzi ezingenasifunda njengoba zihamba lapho zifuna ukudla.
Hamba izinkunzi, uqaphe futhi ubambe insimu yazo ukuze uhambisane nezinkomo zezinsikazi ezidlula. Izinkunzi ezingenasimila, ezidlula ensimini yomunye, zizithoba ngaphansi kwenkunzi enamandla ukugwema ukuhlukunyezwa kwayo. U-Oryx uyaziwa ngokuxosha izingonyama futhi aze azibulale ngisho ngokusebenzisa izimpondo zabo ezidumekayo.